Inhloso yalo mfundazwe ukwakha abaholi abanohlonze e-Afrika nokuqhakambisa abafundi abakhombisa ubuholi nokuthembeka, abazisa imfundo nokuvulela abanye amathuba, abanomqondo webhizinisi nokusungula izinto ezintsha futhi abagqugquzela ukubuyisana, inkululeko, ukuthula nokuthuthuka kwawo wonke umuntu.
UKantize uthe ukuhlomula ngalo mfundaze, iMandela Rhodes Scholarship, kusho lukhulu kuye.
‘Ngethemba ukuthi ngizokhuthaza intsha ukuthi sisukume sifune ukuzakhela ikusasa esilifunayo. Asikwazi ukubalekela ukusebenzela ikusasa lethu ngokuzithela ngabandayo manje.’
Kumanje uKantize wenza ucwaningo olugxile ekuhloleni ukungcola emanzini, phecelezi i-electrochemical detection of water pollutants. Uhlose ukusebenzisa ulwazi azoluthola ukuthuthukisa izindlela zokucwaninga ukungcola namanye amakhemikhali ayingozi emanzini kanjalo nezindlela zokuwahlanza ukwandisa amanzi okuphephile ukuwaphuza.
Uhlela ukuthuthukisa ukusebenza izinzwa zikagesi, ezibizwa ngama-electrochemical sensors, ezizoba bukhali kakhulu kodwa zishibhe kunezindlela ezikhona njengamanje.
UKantize wakhombisa ukuhlakanipha nokuba bukhali kwakhe ezincwadini nokuzimisela ngesikhathi efundela iziqu ze-BSc in Chemistry and Chemical Technology ne-Honours kwi-Chemistry naziphasa ngamalengiso yize ayebhekene nezinselelo okubalwa kuzo ukuhamba ibanga elide elingamakhilomitha ayisishiyagalombili nsuku zonke ukuya enyuvesi kanjalo nokufunda ulimi olusha.
Iphupho lakhe lokufisa ukuba wudokotela lamholela ekwenzeni izifundo ze-Chemistry e-UKZN, isifundo asiphasa ngamalengiso. Uthi uyasithanda lesi sifundo ngenxa yokuthi sichaza ukuthi kungani izinto zenzeka ngendlela ezenzeka ngayo. UKantize ubehlale ephuma phambili ekilasini, ehlomula ngemifundaze ebimsiza ukuqhuba izifundo zakhe.
Akagcini nje ngokubamba iqhaza kwezemfundo kuphela. UKantize uphinde abe wuNobhala-Jikelele we-Burundian Refugee Community eMgungundlovu lapho benezinhlelo zokuthuthukisa intsha nokubhekelela ezinye izinhlelo zomphakathi.
‘Ngabona kunesidingo sokuthi kube khona umuntu ozosukumela lezi zinto,’ kusho uKantize. Le nhlangano imqoka ngoba njengabantu baseBurundi sinezinselelo futhi kuhlale kukuhle uma abantu behlanganisa amakhanda ukuzama ukufukulana.’
UKantize ubonge unina, umalume nomalumekazi wakhe ahlala nabo, udadewabo nabangani bakhe ngeqhaza elibalulekile empilweni yakhe.